Io no fampitam-baovaon’ny mpitandro filaminana avy ao amin’ny borigadin’ny zandary avy ao Andoharanofotsy tamin’ny tafa manokana tamin’ny mpanao gazetinay mahakasika ny lozam-pifamoivoizana teny amin’ny By-pass. Teo amin’ny lalambe mikodana ho any Iavoloha, akaikin’ny tobin-dasantsy “Jovenna”, avy any Alasora no nitranga ny loza. Fiarabe an’ny orinasa mpanao lalana iray no nifaoka io renim-pianakaviana io ka naratra mafy ary efa nentin’ireo nanatri-maso tany amin’ny ivon-toeram-pitsaboana sahaza azy, omaly sahabo ho tamin’ny 6ora sy sasany hariva. Tsy nahatratra azy teo ireo mpitandro filaminana, raha ny fampitam-baovaon’izy ireo hatrany noho ny hakingan’ny olona nandray andraikitra.
Nanampy fanazavana ny zandary avy ao Andoharanofotsy fa nosokirina tao anatin’ilay fiara vaventy ny mpamily izay nidofotra tamin’ny vatana fiara fitondrana entana na “remorque”. Voatery niantsoana mpamonjy voina mihitsy ary ora maro vao voasokitra tao. Noho ny dona sy ny ratra ary ny fahaverezan-dra be loatra nahazo azy dia tsy tana ny ainy. Mampatsiahy hatrany ny manampahefana, indrindra ny mpitandro filaminana amin’ny fanajana ny fetran’ny hafainganam-pandehan’ny fiara mba isorohana hatrany ny loza.